महान रेस्लर तथा अभिनेता रकको पोस्टले सबैको आँखा रसायो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
महान रेस्लर तथा अभिनेता रकको पोस्टले सबैको आँखा रसायो
रोचक । डब्लुडब्लुई हुँदै हलिउडमा प्रवेश गरेका रक अर्थात् ड्वेन जोनसन तेस्रो सन्तानको बुवा बन्न सफल भएका छन् । अभिनेता तथा रेसलर जोनसनकी श्रीमति लरेन जोनसनले तेस्रो सन्तानका रुपमा छोरीलाई जन्म दिएकी छन् ।
यो खबरबाट खुशी भएका जोनसनले आफ्नी सानी छोरीसँगैको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा सेयर गरेका छन् । जोनसनको यो तस्बिरले अहिले धेरैलाई भावुक बनाउनुका साथै एउटा पितालाई आफ्नो सन्तान प्रतिको दायित्व बोध गराएको छ । यो तस्बिरमा जोनसनले आफ्नी छोरीलाई छातीमा टासेका छन् । यसका साथै उनले आफ्नो भावना पनि व्यक्त गरेका छन् । उनले छोरीको नाम टियाना जिया जोनसन राखेका छन् ।
आफ्नो भावुक संदेशमा जोनसनले लेखेका छन्( म एउटा अर्को शक्तिशाली छोरी पाएर अत्यन्तै खुशी तथा सौभाग्यशाली अनुभव गरिरहेको छु । टियाना यो संसारमा प्रकृतिले दिएकको शक्तिको रुपमा आएकी छन् । मम्मी लरेन जोनसनले पनी तिमीलाई एउटी रक स्टारको रुपमा जन्म दिएकी छन् । म अत्यन्तै माया गर्ने तथा दृढ शक्तिले भरपुर महिलाको बीचमा छु ।
टियानाको जन्ममा सहयोग गरिसकेपछि म लरेन तथा उनी जस्तै सबै महिलाहरु प्रति मायाको नयाँ स्तरमा पुगिसकेको छु, जसलाई व्यक्त गर्न निकै मुश्किल छ । म उनीहरु सबैलाई सम्मान तथा प्रशंसा गर्दछु ।
म एउटा कुरा अझै जोड्न चाहान्छु कि जब कुनै महिला बच्चालाई जन्म दिने तरखरमा हुन्छिन्, त्यस्तो बेलामा उनलाई साथ तथा समर्थन को अति आवश्यक हुन्छ । यसमा पनि महत्वपूर्ण समय त्यो हुन्छ, जतिबेला तपाईको सन्तान यो संसारमा आउँछ । यो जीवनमा परिवर्तन गर्ने र एक महिला प्रति सम्मान तथा प्रशंसा गर्ने क्षण हो ।
आफ्नाी छोरीलाई उनले भनेका छन् टियाना जियालाई पनि अन्य दूई जेठी छोरीहरु सिमोन एलेगजेन्ड्रा तथा जस्मिन लियालाई जस्तै माया गर्ने छु, गाइड गर्ने छु साथै रक्षा पनि गर्ने छु । म बाँकी जीवन उसको मुहारमा हाँसो ल्याउनका लागि मेहनत गर्ने छु । उसो त तिम्रो बुवाको काँधमा अन्य धेरै जिम्मेवारीहरु छ, तर सबै भन्दा राम्रो मलाई तिम्रो बुवाको जिम्मेबारी बहन गर्न पाउँदा लागेको छ ।